Monash University - Study in Australia. Noqo Ardayda Caalamiga ah
aasaasay : 1958
Ardayda (qiyaastii.) : 68000
Ha iloobin in aad wada hadlaan University Monash
Qor at University Monash
At Monash, waxaan jeclahay inaan kala wargelinaysaa kasta oo aynu qabanayno.
Laakiin waxaan gudbo niyad wanaag. Waxaan saameyn ku, gudaha iyo dibada. Waxaan nahay jaamacad caalami ah la joogaan a on afar qaaradood. Oo qorshaha mustaqbalka waa hami.
Samaynta farqi qaadataa tamar iyo Niyadda iyo sidoo kale waayo-aragnimo iyo xigmad. Sida jaamacadda dhalinyaro ah, our aragti waa horumar iyo rajo. Waxaan ma ka socdeen cynicism, dhaqan ama heshiiska.
Waxaan soo jiidato culimada ugu fiican, laakiin ma tahay elitist. Waxaan albaabada noo furo qof kasta oo loo diyaariyey si adag u shaqeeyaan si ay u sameeyaan isbeddel.
Waxaan aragnay wanaagsan ka gaari by dadka Monash meelaha sida chemistry cagaaran, waaritaanka, iyo shilalka iyo dhaawacyada. Waxaan dhiirigelinayaa by guulaha iyo doorka ayaan u ciyaari iyaga oo ku.
Waxaan leenahay shan xarumood ee degaanka Victoria oo dhan, laba goobood caalamiga ah ee Malaysia iyo South Africa, iyo xarumaha ee Dadka Republic of China, Italy iyo India. Kasta waxay bixisaa bay'ad in tilmaamaysaa iyo korisaa tayo - iyo jirsado tayo gaadhay awoodda.
Waxaan aaminsanahay habka ugu wanaagsan si loo caawiyo dadka aannu la kulmaan caqabadaha ay la kulmaan waxaa ay u siiyaan jawi taageero. Waxaan Champion iyo taageero ardayda si ay u leeyihiin waayo-aragnimo ah jaamacad xusuus. Waa jaamacad saaxiibtinimo - iyadoo aan loo eegayn oo campus aad ka qayb.
From fursadaha cilmi iskaashi, si loo dhiso xiriirka bulshada, our diiradda had iyo jeer waa on sida aan awood karaan dadkeenna inuu saameyn wanaagsan ku dunida. Waxyaabaha sida isha bionic iyo Relenza anti flu-daroogada.
hamiga wadaago na dhaqaaqo weeraryahanka, si degdeg ah. In badan oo la xiriira, xiriir waxtar leh oo awood leh aan ka dhigi kara, Ilaaheenna saameyn weyn ku noqon doona.
Our dhiga Weli waxaan baran (“Aniga ayaa wali barashada”) na xusuusinayaa in search for aqoon marnaba dhamaado. Waxaan rasaas la hamiga rogrogmada na riixo wax fiican in la sameeyo, si ay u dejiyaan bartilmaameedyo cusub oo dhulkay cusub jebin.
Si ardayda iyo shaqaalaha in ay si togan u saamayn bulshadooda iyo dunida, waa in aan iyaga ku qalabeeyaan iyo iyaga dhiiri - si ay u noqon karaan wakiilada isbedelka.
Kuliyada Art Design & Architecture (MADA)
Kuliyada Ganacsiga iyo Dhaqaalaha
Kuliyada Technology Information
Kulliyadda Daawada, Nursing and Health Science
Kuliyada Farmashiyaha iyo Pharmaceutical Sciences
University Monash waxaa la abuuray by sharciga Baarlamaanka State of Victoria ee 1958 iyadoo ay sabab u Report Murray ah, kaas oo la wakiishay 1957 by markaas Ra'iisul MinisterRobert Menzies in la dhiso jaamacad labaad ee gobolka of Victoria. Jaamacadda ayaa loo magacaabay ka dib markii guud caan Australia Sir John Monash. Tani waxa ay ahayd jaamacad ugu horeysay ee Australia in la magacaabay ka dib markii qof, halkii magaalo, gobolka ama gobolka.
campus asalka ahaa ee xaafada koonfur-bari Melbourne ee Clayton (waxa hadda waa City ee Monash). Golaha ayaa ugu horeysay University, hogaaminayo Monash ugu horeysay ee Chancellor Sir Robert Blackwood, xulay Sir Louis Matheson, si ay u noqdo kan ugu horreeya-ku-xigeenka-Chancellor of University Monash, meel uu qabtay ilaa 1976. Jaamacadda ayaa la siiyey goobta ah oo ballaaran oo ah 100 hektar oo dhul furan Clayton. The 100 hektar oo dhul ka kooban oo ka mid ah hore Talbot suuxdin Colony.
From ay qaadashada ugu horeysay ee 357 ardayda Clayton on 13 March 1961, jaamacadda si degdeg ah u koray in tiro size iyo ardayga si by 1967, waxaa ku qoran in ka badan 21,000 ardayda ilaa markii la dhisay. Sanadihii hore, u bixiyey undergraduate iyo darajo sarre oo injineernimada, daawo, sayniska, arts, dhaqaalaha, siyaasadda, waxbarasho, iyo sharciga. Waxay ahayd bixiyaha ugu weyn ee meelaha ardaygu caalamiga hoos Plan Colombo ah, oo wuxuu arkay ardayda ugu horeeyay ee Asian galaan nidaamka waxbarasho ee Australia.
Sanadihii hore waxbaridda, cilmi-baarista iyo maamulka, Monash lama dulman by dhaqanka, xididana. Monash ahaa awoodaan in ay qaataan habab casri ah oo aan wax iska caabin ka mid ah kuwa ka jeeclaadeen status quo. A-dhismeedka maamul ee casriga ah la qotomiyey; xarumaha cilmi-baarista ugu horeeyey ee Australiya iyo deeqo waxbarasho u huray in Australiyaanka asaliga ah ayaa waxaa la aasaasay.
Sanadihii ugu dambeeyey, University ayaa caan ku cilmi-caafimaad. highlight A of this yimid 2000, marka Professor Alan Trounson ku hogaamiyay kooxda reer saynisyahano oo ku dhawaaqay in ay dunida in unugyada asliga dareemayaasha ku heli karto unugyada jirridda ee embriyaha, daahfurka ah taas oo keentay in la kordhiyo weyn ee xiisaha iman kara unugyada asliga ah. Waxa kale oo keentay in Monash lagu kaalinta in hogaanka 20 jaamacadaha adduunka ee biomedicine.
On 21 October 2002 Huan Yun “Allen” Xiang, toogteen laba qof oo ku dhintay iyo ku dhaawacmay shan qof oo kale on campus Clayton ah.
-Xigeenka Chancellor iyo madaxweynihii hore ee Jaamacada Monash ahaa Professor Edward Byrne AC (ka 6 July 2009 in September 2014).Ku-xigeenka Chancellor iyo Madaxweynaha University Monash waa Professor Margaret Gardner. Gardner ayaa loo magacaabay soo socda ku-xigeenka Chancellor iyo Madaxweynaha University Monash ee December 2013. Iyadu waa haweeneydii ugu horeysay ee si uu u qabto jagada iyo bilowdey bishii September 2014.
Ma rabtaa wada hadlaan University Monash ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
University Monash on Map
Photos: Monash University rasmiga ah Facebook
dib u eegista University Monash
Ku biir si ay ugala hadlaan of University Monash.